BANKY MICROCRED: Niova anarana | déliremadagascar
BANKY MICROCRED: Niova anarana
Socio-eco	 10 février 2018 R Nirina
Marika vaovao, tolotra mihatsara. Raha tokony ho 4,5 %, lasa 8 % ny zana-bola azo mandritra ny taona 2018 ho an’ireo olona manokatra kaonty tahiry amin’ity volana febroary ity. Maimaim-poana kosa raha hanokatra kaonty tsotra. Feno 10 taona ny Banky Microcred eto Madagasikara. Ankehitriny, niova ho “Baobab” ny anarany. Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy ny 08 febroary 2018 teny Anosivavaka io fiovana anarana io. “Zava-boahary anisany mampiavaka an’i Madagasikara ny Baobab. Tsy vitan’ny hoe : manan-danja ara-koltoraly izy ity fa mbola ampiasaina amin’ny fomba maro samihafa ihany koa. Mifanaraka amin’ny tanjon’ny “Groupe Microcred” ny lanjan’ny Baobab. Izany nanovana ny anaran’ny banky ho “Baobab”, hoy ny Filoha Tale Jeneralin’ny banky Baobab, Arnaud Ventura.
Mivoatra manaraka amin’ny rivotry ny fandrosoana ny tolotra omen’ny banky Baobab an’ny mpanjifa toy ny “biométrie, taka loan, ALIP….Ankoatra ny fitehirizana vola sy fampindramam-bola, manana tolotra hafa ihany koa ny Bany Baobab. Hita eny amin’ireo masoivoho 38 manerana an’i Madagasikara izany. Mpanjifa miisa 164 000 no efa niditra mpikambana.